Finland oo hogaamiye cusub dooratay iyo taageerada cunsuriyiinta oo hoos u dhacday | Somaliska
Shalay waxaa doorashada baarlamaanka ay ka dhacday wadanka dariskeena ah ee Finland, taasoo laga adkaaday raysal wasaaraha wadanka. Xisbiga dhexda ee Centre party ayaa la wareegay hogaanka wadanka, iyadoo uu raysal wasaaraha cusub noqonayo nin taajir ah oo lagu magaacaabo Juha Sipilä. Markii la tiriyay dhamaan cododka ayaa xisbigiisa ay helaan 49 kursi, iyadoo xisbiga ku soo xiga ee ah cunsuriga ah ee loo yaqaan True Finns ay heleen 38 cod iyagoo galay kaalinta labaad.
Ololaha doorashada Finland ayaa inta badan ku salaysnaa dhaqaalaha wadanka oo hoos u dhacay, iyadoo xisbiga keliya ee soo galootiga neceb uu yahay True Finns oo doorashadii hore helay 19% balse doorashadaan ayay heleen 17%. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa in raysal wasaaraha cusub uu wadahadal la galo xisbigaas, maadaama uusan haysan aqlabiyad ku filan. Xisbiga True Finns oo ka soo horjeeda soo galootiga ayaa la sheegay in uusan la mid ahayn xisbiga Sweden ka dhisan ee SD, iyagoo la sheegay in ay xoogaa ka dabacsanyihiin isla markaana ay yihiin dad waayeel u badan. Xisbigaas ayaa qaasatan xooga saaraya arimaha EU-da iyagoo ka soo horjeeda in Midowga Yurub ay taageero lacageed siiyaan wadanka Greece.
Balse haddii ay soo galaan dowlada cusub, ayay u badantahay in ay saameyn ku yeelanayaan arimaha soo galootiga iyo socdaalka.
Nin Swedish ah oo nukliyeer gurigiisa ku sameeyay
Ninka Sawirka Ka Muuqda Somali Miyaa? Dhegta U Duranaa Duliga